RAM ဆိုတာ ဘာလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
6322 Shares 2382 Views
Ko Thuya Mar 21, 2018
Random Access Memory or RAM ဟာ ဒတ်စတော့ ပီစီများ၊ လက်ပ်တော့ပ်များ၊ တက်ဘလက်များ၊ စမတ်ဖုန်းများနဲ့ ဂိမ်းစက်များအတွက် အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူသာ မပါရင် အဲဒီ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများကို သုံးတဲ့ အခါမှာ အလွန် နှေးကွေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ App များ၊ ဂိမ်းများကို ဖွင့်လို့ မရတဲ့အထိတောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
RAM ဟာ ဘာလဲလို့ မေးရင် သင့် ကွန်ပြူတာ၊ စမတ်ဖုန်းက လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ်မှာ လိုအပ်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ခဏတာ သိမ်းပေးထားတဲ့ အလွန်လျှင်မြန်တဲ့ ကွန်ပြူတာ မန်မိုရီ အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကြာရှည်စွာ သိမ်းပေးထားတဲ့ Hard Drive လို Storage များနဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။
RAM ဟာ System ရဲ့ Short-Term Memory လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွဲ့နိုင်ပါတယ်။ သူက အကြောင်းအရာ အသစ်များကို လျှင်မြန်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ ၀က်ဘ်ဘရောက်စာ၊ သင်သုံးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံ တည်းဖြတ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ၊ သင် ကစားနေတဲ့ ဂိမ်းများနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို Load လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အသုံးပြုရာမှာ လျှင်မြန်စေပါတယ်။ Hard Drive , Solid State Drive များမှာလို RAM မှာ သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေစရာ မလိုပါဘူး။ ဘရောက်စာမှာ Tab အသစ်တစ်ခုဖွင့်တိုင်း၊ အလုပ်တစ်ခုလုပ်တိုင်း သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို သူက ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
RAM ဟာ သင့်ရဲ့ စနစ်နဲ့ နက်ရှိုင်းစွာ ဆက်သွယ်ထားတာကြောင့် သူ့ထံမှ ဒေတာများကို နေရာတိုင်းကနေ အလွန် လျှင်မြန်စွာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Short-Term Memory ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေတာများကို အမြဲ သိမ်းပေးထားမှာ မဟုတ်ဘဲ အလုပ်အသစ်လုပ်တိုင်း ဒေတာ အသစ်များကို သိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ကွန်ပြူတာ နယ်ပယ်မှာ Volatile လို့ ခေါ်ပြီး ပါဝါ ပိတ်လိုက်တာနဲ့ သူမှတ်သားထားသမျှကို ဖယ်ရှားပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်များစွာကို လျှင်မြန်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သူက အရေးပါပါတယ်။
RAM ဟာ မန်မိုရီလိုပဲ Term များစွာကို ခြုံငုံထားပြီး အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါတယ်။ DRAM (dynamic random access memory), SDRAM (synchronous dynamic random access memory) စသဖြင့် မတူညီတဲ့ အခေါ်အဝေါ်များစွာ ရှိပါတယ်။ အခေါ်အဝေါ်နဲ့ အမျိုးအစားများ ကွဲပြားနေပေမယ့် သူ့ရဲ့ အခြေခံ အလုပ်က တူညီပါတယ်။
အများဆုံး တွေ့ရတဲ့ RAM အမျိုးအစားကတော့ DDR4 ဖြစ်ပြီး အခြား စက်အဟောင်းများမှာတော့ DDR2, DDR3 များကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်း ပိုမိုကြီးမားခြင်းဟာ ပိုမို လျှင်မြန်တဲ့ megahertz(MHz) အဆင့်ကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ Generation တစ်ခုချင်းစီမှာ Physical ပိုင်းအရ ပြောင်းလဲမှုများလည်း ရှိပါတယ်။
ဗီဒီယို ဂိမ်း နယ်ပယ်မှာတော့ VRAM or Video RAM ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ VRAM ဟာ Graphic Chip အတွက် မန်မိုရီ သို့မဟုတ် Graphics Card မှာ တည်ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Graphics DDR SDRAM သို့မဟုတ် များသောအားဖြင့် GDDR လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် Graphics Card များမှာ GDDR5ကို အသုံးပြုကြပြီး အချို့မှာတော့ GDDR5X ကို စံနှုန်းအဖြစ် သုံးထားကြပါတယ်။ နောက်ထုတ်မယ့် မျိုးဆက်သစ်များမှာ GDDR6 လို့ ခေါ်ဆိုကြမှာပါ။
အချို့ ဂရပ်ဖစ် ကဒ်များမှာ High-Bandwidth-Memory (HBM , HBM2) လို့ ခေါ်တဲ့ မတူညီတဲ့ အမျိုးအစားကို အသုံးပြုထားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဈေးနှုန်းကြီးမားပြီး စွမ်းဆောင်ရည် အပိုင်းမှာ အားသာချက် အချို့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်မှု အပိုင်းမှာ အခက်အခဲများ ရှိတဲ့အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မသုံးကြပါဘူး။
အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ ၀ယ်တဲ့အခါမှာ RAM ပမာဏကို အဓိက စဉ်းစားကြပါတယ်။ RAM ပမာဏကို gigabytes or GB ဖြင့် ဖော်ပြကြပြီး များသောအားဖြင့် 1GB နဲ့ 8GB အကြားမှာ ရှိကြပါတယ်။ RAM ပမာဏများလေ Multitasking ကို ပိုမို ကောင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ CPU မှာလိုပဲ RAM ကိုလည်း Clock Speed ဖြင့် တိုင်းတာကြပြီး သူက တစ်စက္ကန့်လျှင် ဒေတာ ပမာဏ ဘယ်လောက်များများကို ကိုင်တွယ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို ထိန်းချုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ RAM ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို megabyetes per second ဖြင့် တိုင်းတာကြပေမယ့် ရောင်းချတဲ့ အခါမှာတော့ MHz ဖြင့် ဖော်ပြကြပါတယ်။
များသောအားဖြင့် DDR4 Memory ဟာ 2133MHz ၀န်းကျင်မှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 4000MHz အထိ အလုပ်လုပ်တဲ့ DDR4 အချို့လည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးအစားများကို DDR4-2133 လို အမည်များဖြင့် ရောင်းချကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း ရှုပ်ထွေးတဲ့ အမည်များဖြင့် ရောင်းချပေးကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် DDR4-2133 PC4-17000 မှာဆိုရင် ၁၇၀၀၀ ဟာ ၂၁၃၃ ထက် MHZ Speed ဟာ ၈ လောက် ပိုမိုမြင့်မားတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ Channel များဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ် မန်မိုရီ အများစုမှာ Dual-Channel များကို ရောင်းချပေးထားကြပါတယ်။ သူ့မှာ အမျိုးအစားနဲ့ အမြန်နှုန်း တူညီတဲ့ RAM Stick နှစ်ခုကို ထည့်သွင်းထားပြီး CPU’s Memory Controller ကို ပိုမို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပိုမို လျှင်မြန်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် RAM များမှာ Channel ၃ ၊ ၄ ခု အထိပါလာကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ ပိုမိုများပြားတဲ့ Channel များပါတဲ့ RAM များဟာ နေ့စဉ် ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုမှုများမှာ ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်များ မရှိကြပါဘူး။
RAM ဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးသလဲ ?
RAM ဟာ သင့် ဒတ်စတော့၊ တက်ဘလက်၊ စမတ်ဖုန်းများကို လျှင်မြန်စွာ အလုပ်လုပ်စေဖို့အတွက် အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် RAM ပမာဏများခြင်းနဲ့ MHz မြင့်မားတိုင်း သင့် ကွန်ပြူတာကို အလွန်လျှင်မြန်စေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင် ပြုလုပ်မယ့် အလုပ်များကို ကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ RAM ဟာ လုံလောက်ပါတယ်။ စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်မားစေဖို့အတွက် CPU နဲ့ Graphics Card များကလည်း အရေးပါပါတယ်။ RAM ,CPU , Graphics Card များကို မျှတစွာ တွဲဆက်ထားမှသာ စက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ လျှင်မြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hard Drive များကို SSD များဖြင့် အဆင့်မြှင်ခြင်းဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
Random Access Memory or RAM ဟာ ဒတျစတော့ ပီစီမြား၊ လကျပျတော့ပျမြား၊ တကျဘလကျမြား၊ စမတျဖုနျးမြားနဲ့ ဂိမျးစကျမြားအတှကျ အရေးအကွီးဆုံး အစိတျအပိုငျး တဈခု ဖွဈပါတယျ။ သူသာ မပါရငျ အဲဒီ အီလကျထရောနဈ ပစ်စညျးမြားကို သုံးတဲ့ အခါမှာ အလှနျ နှေးကှေးနမှော ဖွဈပါတယျ။ App မြား၊ ဂိမျးမြားကို ဖှငျ့လို့ မရတဲ့အထိတောငျ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
RAM ဟာ ဘာလဲလို့ မေးရငျ သငျ့ ကှနျပွူတာ၊ စမတျဖုနျးက လကျရှိနဲ့ အနာဂတျမှာ လိုအပျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ခဏတာ သိမျးပေးထားတဲ့ အလှနျလြှငျမွနျတဲ့ ကှနျပွူတာ မနျမိုရီ အမြိုးအစား တဈခု ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ကွာရှညျစှာ သိမျးပေးထားတဲ့ Hard Drive လို Storage မြားနဲ့ ကှဲပွားပါတယျ။
RAM ဟာ System ရဲ့ Short-Term Memory လို့ အဓိပ်ပါယျဖှဲ့နိုငျပါတယျ။ သူက အကွောငျးအရာ အသဈမြားကို လြှငျမွနျစှာ လလေ့ာသငျယူနိုငျပွီး သငျ့ရဲ့ ဝကျဘျဘရောကျစာ၊ သငျသုံးနတေဲ့ ဓါတျပုံ တညျးဖွတျတဲ့ ဆော့ဖျဝဲ ၊ သငျ ကစားနတေဲ့ ဂိမျးမြားနဲ့ ပတျသကျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားအားလုံးကို Load လုပျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အသုံးပွုရာမှာ လြှငျမွနျစပေါတယျ။ Hard Drive , Solid State Drive မြားမှာလို RAM မှာ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ရှာဖှစေရာ မလိုပါဘူး။ ဘရောကျစာမှာ Tab အသဈတဈခုဖှငျ့တိုငျး၊ အလုပျတဈခုလုပျတိုငျး သကျဆိုငျတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို သူက ပွသပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
RAM ဟာ သငျ့ရဲ့ စနဈနဲ့ နကျရှိုငျးစှာ ဆကျသှယျထားတာကွောငျ့ သူ့ထံမှ ဒတောမြားကို နရောတိုငျးကနေ အလှနျ လြှငျမွနျစှာ ရယူနိုငျပါတယျ။ Short-Term Memory ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒတောမြားကို အမွဲ သိမျးပေးထားမှာ မဟုတျဘဲ အလုပျအသဈလုပျတိုငျး ဒတော အသဈမြားကို သိမျးပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကို ကှနျပွူတာ နယျပယျမှာ Volatile လို့ ချေါပွီး ပါဝါ ပိတျလိုကျတာနဲ့ သူမှတျသားထားသမြှကို ဖယျရှားပဈမှာ ဖွဈပါတယျ။ အလုပျမြားစှာကို လြှငျမွနျစှာ ပွုလုပျနိုငျဖို့အတှကျ သူက အရေးပါပါတယျ။
RAM ဟာ မနျမိုရီလိုပဲ Term မြားစှာကို ခွုံငုံထားပွီး အမြိုးအစားမြားစှာ ရှိပါတယျ။ DRAM (dynamic random access memory), SDRAM (synchronous dynamic random access memory) စသဖွငျ့ မတူညီတဲ့ အချေါအဝျေါမြားစှာ ရှိပါတယျ။ အချေါအဝျေါနဲ့ အမြိုးအစားမြား ကှဲပွားနပေမေယျ့ သူ့ရဲ့ အခွခေံ အလုပျက တူညီပါတယျ။
အမြားဆုံး တှရေ့တဲ့ RAM အမြိုးအစားကတော့ DDR4 ဖွဈပွီး အခွား စကျအဟောငျးမြားမှာတော့ DDR2, DDR3 မြားကို အသုံးပွုထားကွပါတယျ။ ကိနျးဂဏနျး ပိုမိုကွီးမားခွငျးဟာ ပိုမို လြှငျမွနျတဲ့ megahertz(MHz) အဆငျ့ကို ဖျောပွနပေါတယျ။ Generation တဈခုခငျြးစီမှာ Physical ပိုငျးအရ ပွောငျးလဲမှုမြားလညျး ရှိပါတယျ။
ဗီဒီယို ဂိမျး နယျပယျမှာတော့ VRAM or Video RAM ကို အသုံးပွုကွပါတယျ။ VRAM ဟာ Graphic Chip အတှကျ မနျမိုရီ သို့မဟုတျ Graphics Card မှာ တညျဆောကျထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ Graphics DDR SDRAM သို့မဟုတျ မြားသောအားဖွငျ့ GDDR လို့ ချေါကွပါတယျ။ ခတျေပျေါ Graphics Card မြားမှာ GDDR5ကို အသုံးပွုကွပွီး အခြို့မှာတော့ GDDR5X ကို စံနှုနျးအဖွဈ သုံးထားကွပါတယျ။ နောကျထုတျမယျ့ မြိုးဆကျသဈမြားမှာ GDDR6 လို့ ချေါဆိုကွမှာပါ။
အခြို့ ဂရပျဖဈ ကဒျမြားမှာ High-Bandwidth-Memory (HBM , HBM2) လို့ ချေါတဲ့ မတူညီတဲ့ အမြိုးအစားကို အသုံးပွုထားကွပါတယျ။ သူတို့ဟာ ဈေးနှုနျးကွီးမားပွီး စှမျးဆောငျရညျ အပိုငျးမှာ အားသာခကျြ အခြို့ရှိကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထုတျလုပျမှု အပိုငျးမှာ အခကျအခဲမြား ရှိတဲ့အတှကျ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ မသုံးကွပါဘူး။
အီလကျထရောနဈ ပစ်စညျးမြား ဝယျတဲ့အခါမှာ RAM ပမာဏကို အဓိက စဉျးစားကွပါတယျ။ RAM ပမာဏကို gigabytes or GB ဖွငျ့ ဖျောပွကွပွီး မြားသောအားဖွငျ့ 1GB နဲ့ 8GB အကွားမှာ ရှိကွပါတယျ။ RAM ပမာဏမြားလေ Multitasking ကို ပိုမို ကောငျးစှာ ပွုလုပျနိုငျလေ ဖွဈပါတယျ။ CPU မှာလိုပဲ RAM ကိုလညျး Clock Speed ဖွငျ့ တိုငျးတာကွပွီး သူက တဈစက်ကနျ့လြှငျ ဒတော ပမာဏ ဘယျလောကျမြားမြားကို ကိုငျတှယျနိုငျမလဲ ဆိုတာကို ထိနျးခြုပျတာ ဖွဈပါတယျ။ RAM ရဲ့ အမွနျနှုနျးကို megabyetes per second ဖွငျ့ တိုငျးတာကွပမေယျ့ ရောငျးခတြဲ့ အခါမှာတော့ MHz ဖွငျ့ ဖျောပွကွပါတယျ။
မြားသောအားဖွငျ့ DDR4 Memory ဟာ 2133MHz ဝနျးကငျြမှာ အလုပျလုပျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ 4000MHz အထိ အလုပျလုပျတဲ့ DDR4 အခြို့လညျး ရှိပါတယျ။ အဲဒီ အမြိုးအစားမြားကို DDR4-2133 လို အမညျမြားဖွငျ့ ရောငျးခကြွပါတယျ။ တဈခါတဈလမှောလညျး ရှုပျထှေးတဲ့ အမညျမြားဖွငျ့ ရောငျးခပြေးကွပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ DDR4-2133 PC4-17000 မှာဆိုရငျ ၁၇၀၀၀ ဟာ ၂၁၃၃ ထကျ MHZ Speed ဟာ ၈ လောကျ ပိုမိုမွငျ့မားတယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။
နောကျတဈခုကတော့ Channel မြားဖွဈပါတယျ။ ဒီနခေ့တျေ မနျမိုရီ အမြားစုမှာ Dual-Channel မြားကို ရောငျးခပြေးထားကွပါတယျ။ သူ့မှာ အမြိုးအစားနဲ့ အမွနျနှုနျး တူညီတဲ့ RAM Stick နှဈခုကို ထညျ့သှငျးထားပွီး CPU’s Memory Controller ကို ပိုမို ပံ့ပိုးပေးနိုငျတဲ့အတှကျ ပိုမို လြှငျမွနျပါတယျ။ စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ RAM မြားမှာ Channel ၃ ၊ ၄ ခု အထိပါလာကွပါတယျ။ လကျတှမှေ့ာတော့ ပိုမိုမြားပွားတဲ့ Channel မြားပါတဲ့ RAM မြားဟာ နစေ့ဉျ ကှနျပွူတာ အသုံးပွုမှုမြားမှာ ထူးခွားတဲ့ စှမျးရညျမြား မရှိကွပါဘူး။
RAM ဟာ ဘယျလောကျ အရေးကွီးသလဲ ?
RAM ဟာ သငျ့ ဒတျစတော့၊ တကျဘလကျ၊ စမတျဖုနျးမြားကို လြှငျမွနျစှာ အလုပျလုပျစဖေို့အတှကျ အလှနျ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ RAM ပမာဏမြားခွငျးနဲ့ MHz မွငျ့မားတိုငျး သငျ့ ကှနျပွူတာကို အလှနျလြှငျမွနျစတော မဟုတျပါဘူး။
သငျ ပွုလုပျမယျ့ အလုပျမြားကို ကောငျးစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျတဲ့ RAM ဟာ လုံလောကျပါတယျ။ စနဈတဈခုလုံးရဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို မွငျ့မားစဖေို့အတှကျ CPU နဲ့ Graphics Card မြားကလညျး အရေးပါပါတယျ။ RAM ,CPU , Graphics Card မြားကို မြှတစှာ တှဲဆကျထားမှသာ စကျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျဟာ လြှငျမွနျမှာ ဖွဈပါတယျ။ Hard Drive မြားကို SSD မြားဖွငျ့ အဆငျ့မွှငျခွငျးဟာလညျး အရေးကွီးပါတယျ။
ကမ္ဘာမှာ storage အများဆုံး 100TB SSD ကို Nimbus Data မှထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့